६ अर्ब ९० करोडभन्दा बढीको कारोबार : कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै
मंसिर ७, काठमाडौं । गत बिहीवार ६ अर्ब ११ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार हुदाँ ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको शेयर बजारमा आइतवार करिब ७ अर्बको कारोबार भएको छ ।
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार २०१ ओटा कम्पनीको रू. ६ अर्ब ९० करोड ६७ लाख २८ हजार बराबरको १ करोड ६० लाख ३४ हजार ७१७ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यो कारोबार ६३ हजार ५७० पटकको व्यापारमा भएको हो ।
आइतवार पनि कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलेनै ओगटेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ५७ करोड ९१ लाख १९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक कारोबार गर्दै आएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य पनि वृद्धि भइरहेको छ । आइतवार न्यूनतम रू. १ हजार १०८ देखि अधिकतम रू. १ हजार २०१ सम्ममा किनबेच भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २८ ले बढेर रू. १ हजार १३८ पुगेको छ ।
बिहीवार ३६ दशमलव ३२ अंकले बढेर १ हजार ७७८ दशमलव १२ विन्दुमा बन्द भएको बजार आइतवार १ हजार ७९१ दशमलव २२ विन्दुदेखि खुला भएको थियो । यस दिन कारोबार खुला भएको १ घण्टा ५ मिनेटमा बजार १ हजार ८११ दशमलव ६४ विन्दुमा पुगेको थियो । बजार बन्द हुदाँ आइतवार ४ दशमलव ६९ अंक बढेर १ हजार ७८२ दशमलव ८१ विन्दुमा अडिएको छ ।
आइतवार ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स २ अंक बढेर ३४५ दशमलव शून्य ७ विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये बैंकिङ समुह, विकास बैंक समुह र अन्य समुहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समुहको घटेको छ ।
यो दिन बैंकिङ् समुहको सर्वाधिक २ दशमलव २३ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव १ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।आइतवार व्यापारिक समुहको परिसूचक सर्वाधिक ५ दशमलव ६९ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै होटलको ३ दशमलव ९९ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ४८ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको २ दशमलव ५३ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन २ दशमलव ३३ प्रतिशत, लघवित्त शून्य दशमलव १८ प्रतिशत, जीवन बीमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत र म्यचुअल फण्डको परिसूचक २ दशमलव २८ प्रतिशत घटेको हो ।